Khilaafka Siyaasadeed Oo Soo Kala Dhex Galay Dowladda Federaalka Ee Itoobiya Iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida – somalilandtoday.com
Khilaafka Siyaasadeed Oo Soo Kala Dhex Galay Dowladda Federaalka Ee Itoobiya Iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida
(SLT-Jigjiga)-Golaha wasiirrada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu wadaa saaka inay isugu yimaadaan xarunta madaxtooyada, iyadoo magaalada Jigjiga laga soo sheegayo degganaansho la`aan siyaasadeed, kaddib markii madaxweyne Mustafe Muxumad Cumar shalay labo jeer looga yeeray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Mustafe markii uu Jigjiga ku soo laabtay ayuu la shiray golihiisa wasiirrada Dowlad Deegaanka.
Madaxweynaha ayaa tan iyo intii uu xilka qabtay waxaa soo food saaray caqabado badan oo ay ka mid yihiin arrinta isku dhaca qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, waxaa sidoo kale caqabadaha uu wajahay ka mid ahaa sidii caddaaladd loogu heli lahaa dhibbanayaasha la sheegay inay tacaddiyo kala kulmeen maamulkii hore.
Madaxweyne Mustafa ayaa waxaa xilka madaxtinnimada dowlad deegaanka loo doortay 22-kii August sanadkii 2018-kii.
Khilaafka haatan la sheegayo inuu soo kala dhex galay dowladda Federaalka ee Itoobiya iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee uu hoggaamiyo Mustafe Cagjar ayaa ah mid ay dad badan walaac ka muujiyeen.
Wixii kasoo baxa shirkaasi halkan ayaan idiin kuugu soo gudbin doonaa.